फेसबुक तर 'लाइक' बटन छैन ~ The Nepal Romania
5:14 AM कला, चलचित्र समाचार No comments
दीपेन्द्र लामा -नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने साइट फेसबुकको लोकप्रियताले सबैलाई लोभ्याएको छ। फिल्मकर्मीको एक समूह पनि नलोभिने कुरै भएन। उनीहरूले फिल्म नै बनाएका छन्, फेसबुक। सोसियल बेकर्स डटकम अनुसार नेपालमा करिब १७ लाखले फेसबुक प्रयोग गर्छन्। यी सबै युजरले 'फेसबुक' नामक फिल्म हेरे (टिकट दर सय रूपैयाँ मान्दा) १७ करोड रूपैयाँको कारोबार हुन्छ! निर्माताको भागमा कम्तीमा ७ करोड। तर, फेसबुक युजरलाई फ्रेन्ड लिस्टमा एड गर्न त सजिलो छैन, फिल्म हलसम्म डोर्‍याउन कहाँ सजिलो छ र? धेरैजसो युजरलाई नयाँ विचारको भोक हुन्छ। विभिन्न खाले तर्क आदानप्रदान गरिन्छ। समाजका सबै विषयमाथि बहस चलाउँछ। यो समूहले 'नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुस्' भन्ने बिलौना सुन्दैन। फिल्म नै गतिलो हुनुपर्छ।सुरज सुब्बा नाल्बोद्वारा निर्देशित यस फिल्ममा फेसबुकमार्फत् सम्बन्ध बढाएर अपहरणको षडयन्त्र गर्ने कथा छ। समाजमा भइरहेको र पटकपटक हुनसक्ने कथा नै छ। फेसबुक अपराधी र प्रहरी दुवैका लागि सहयोगी माध्यम बनिसकेको छ।तर, फिल्ममा कथा कुन छानियो होइन कथालाई कसरी देखाइयो भन्ने बढी महŒवपूर्ण हुन्छ। ठूलो व्यापारिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने करोडपति केटालाई फेसबुकबाट मायाजालमा फसाउने र अपहरण गर्ने मिसन एउटा समूहले
बनाउँछ। एउटा धनी केटा (जसका वरिपरि थुप्रै युवती हुनसक्छन्) लाई फेसबुक र फोनवार्ताको भरमा बिहेका लागि मनाउन सजिलो छैन। जबकि फिल्ममा १० मिनेटभित्रै फास्टफुड पारामा यो सबैभन्दा जोखिम र कठिन काम फत्ते हुन्छ। त्यसपछि फिल्ममा सुरु हुन्छ यान्त्रिक आतंक।निर्माणाधिन गगनचुम्बी भवनको छतमा बसेर संस्कृति (झरना थापा)ले अपहरण र पैसा असुल्ने योजना बनाएका दृश्यले 'लुट' फिल्मको झझल्को दिन्छ। 'लुट'को हाकु कालेको दाँजोमा 'फेसबुक'की 'हाकु काली' निकै होची ठहर्छे। सायद हाकु कालेको 'बल होइन दिमाग लगा' भन्ने डाइलग यसमा अर्कै पात्र विवेक (सुभाष थापा)लाई दिइएकोले होला।दर्शकले सबै घटनामा मामा (सुनिल थापा)माथि शंका गरोस् भनेर निर्देशकले मामालाई निकै पसिना पुछ्न लगाएका छन्। वास्तवमा गल्ती नगरेको मान्छे त्यसरी लल्याकलुलुक हुँदैन। उता संस्कृति (जो आफै दोषी हो) चाहिँ योदिन (स्वतन्त्रप्रताप शाह) गाडीमा नदेखेपछि निकै झस्किन्छे। निर्देशकको यो इमोसनल ब्ल्याकमेल माफी लायक छैन। पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमै क्यासिनोमा पक्राउ परेको समाचार छापिएपछि मामाले डिएसपी नेपाल (राजेश हमाल)सँग जुवा खेल्दिन भनेर झुठ बोल्दैन कि? भयानक बताइए पनि डिएसपीले मामाको चाहिँ फोन टेप गर्छ, संस्कृतिको गर्दैन। दर्शकले मामामाथि नै शंका गरोस् भनेर होला। साहित्यमा निस्वार्थ साधना गरेको एउटा पात्रले प्राज्ञ पद खुस्किएको पीडा सहन नसकेर आफ्नै कलमले छाती घोपेर आत्महत्या गरेको दृश्य उदेकलाग्दो छ। निस्वार्थ साधना गर्नेलाई पदको मतलब हुँदैन। चाकडीबाज हो भने प्राज्ञ पद खुस्केको भोलिपल्ट अर्को नियुक्ति पड्काउन लागिहाल्छ नि। किन कलमले छाती घोचेर मर्छ? फिल्ममा हिंसा र रक्तपातको बम्पर उपहार छ। चक्कुले नाडी सेरेको, टाउकोमा फलामको पाइपले हिर्काएको, तकियाले छोपेर मुखमा गोली हानेको, केटीमाथि चार जना केटाले मुक्का र लात्ती प्रहार गरेको, घाँटीमा काँटा रोपेर रगत आएको जस्ता दृश्यले धेरै हलिउडका हरर फिल्म सम्झाउँछ। फिल्मको ध्वनिमा पनि हिंसा छ, मानसिक तनाव नै पैदा गर्ने। नेपालको सेन्सर बोर्डले यौन दृश्य र छाडा शब्दलाई मात्र नियन्त्रण गरेको पाइन्छ। जबकि हिंसामाथि पनि नियन्त्रण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। १६ वर्षमुनि र हिंसा हेर्न नसक्ने कुनै पनि उमेरका दर्शकलाई यो फिल्म देखाउन मिल्दैन। एकताका नेपाली फिल्ममा ट्रली र त्रे्कन जति चलाइयो छायांकन उति राम्रो हुन्छ भन्ने भ्रम थियो। हिजोआज यसको ठाउँ 'अड एंगल'ले लिएको छ। बिनाकारण 'अड एंगल'का दृश्य आउँदा आँखालाई भार हुन्छ। वाकवाकी लाग्छ। छायांकनलाई खिच्नुको रूपमा सीमित गरिएको छ, कथावाचनमा जोड्न सकिएको छैन। अभिनयको स्तर चिच्याउने, रुने, नाकमुख खुम्च्याउने, हाँस्ने र डाइलग घोक्नेभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। चाहिने भन्दा बढी डाइलग र क्यामेराको अधैर्यताका कारण कलाकारका अभिनयले 'स्पेस' पाएका छैनन्। यो फिल्ममा बगेका सुनिल थापाको पसिना, झरना थापाको आँसु र अरू पात्रका रगत मिसाउने हो भने नेपालको लोडसेडिङ केही घट्नेछ! सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको सिर्जनात्मक संरचना र यसका युजरले बहसमा उठान गरेका विचारको उचाइलाई निर्देशक सुरज सुब्बा र उनका सहकर्मीले ध्यान दिएको देखिँदैन। फेसबुकमा हुने तर्क, चिन्तन र व्याख्यालाई फिल्मको स्त्रि्कप्ट लेख्ने बेला अनुसरण गरिएको भए पक्कै नतिजा राम्रो निस्किन्थ्यो। एउटा टिमको पसिना, निर्माताको लाखौं रूपैयाँ र हजारौं दर्शकका साढे दुई घन्टा खेर जानु नेपाली फिल्मको असली उन्नति चाहनेका लागि दुःखी हुनुपर्ने विषय हो। मार्क जुकरबर्गको फेसबुकमा भएको तर सुरज सुब्बाको 'फेसबुक'मा हराएको एउटा चिज हो, ‘लाइक' बटन। फिल्मः फेसबुक लेखक/निर्देशकः सुरज सुब्बा नाल्बो निर्माताः सुनिलकुमार थापा कलाकारः झरना थापा, स्वतन्त्रप्रताप शाह, राजेश हमाल, सुनिल थापा, सुभाष थापा, अनुरागमान सिंह कुँवर, विल्सनविक्रम राई आदि। रेटिङः साढे एक तारा